काभ्रे, नुवाकोट र तनहुँमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन चीन सरकारसमक्ष प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले काभ्रेको पाँचखाल, नुवाकोटको त्रिशुली र तनहुँको खैरेनीमा इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । ती तीन स्थानमा छ(छ हजार किलोलिटर क्षमताका पेट्रोल भण्डारणस्थल निर्माण गर्न लागिएको वाणिज्य तथा..
एकैदिन ३ हजारभन्दा बढीले कर तिरे, ब्लुबुक नवीकरण गर्नेको भीड, सेवा दिनै हम्मेहम्मे
काठमाडौं । निजी सवारी साधनलाई इन्धन उपलब्ध गराउन ब्लुबुक (सवारी दर्ता किताब) नवीकरण अनिवार्य गरिएपछि यातायात सेवाकेन्द्रहरूमा कर तिर्नेको भीड लाग्न थालेको छ । नाकाबन्दीयता दैनिक औसत ४ देखि ५ सयसम्म..
पेट्रोल पम्पमा लाइन बसेरै कालोबजारी, यस्तो रहेछ तरिका !
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको अभावको मौका उठाई पेट्रोल पम्पको लाइनमा बसेका सवारी चालकले नै पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले लाइनमा राखेर..
मंगलबारबाट लट अनुसार मोटरसाइकलले ४ दिनसम्म ४ लिटर पेट्रोल पाउने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा पर्सी मंगलबारदेखि निजी मोटरसाइकललाई पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ । यसअघि सोमबारदेखि वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर, आइतबार भएको छलफलले सवारीको लटका आधारमा..
​आइओसीले धनगढीबाट गएका सबै गाडीमा लोड गर्न थाल्यो इन्धन
धनगढी । सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि इन्धन भर्न गएका सबै गाडीहरुमा केही दिनयता भारतीय आयल निगमको बन्थरा डिपोले इन्धन लोड गरेर पठाउन थालेको छ। अघोषित नाकाबन्दीका कारण एक हप्ताअघिसम्म दैनिक बढीमा चाररपाँच गाडीमा..
शुक्रबार कहाँबाट कति आयो इन्धन
काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका देशका प्रमुख नाकाहरुबाट शुक्रबार पनि आयात प्रभावित बन्यो । शुक्रबार दिउँसो विराटनगरको रानी भन्सारबाट ८ ट्यांकर डिजेल, १ ट्यांकर पेट्रोल र ३ ग्यास बुलेटसहित १..
​ रातारात करोडपति बन्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने एसएसपीको चेतावनी, ५ ट्रक खानेतेल बरामद
काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरी परिसरले केएल दुगडको जडीबुटीमा रहेको गोदाममा आज साँझ छापा मारेको छ । प्रहरीले लुकाइराखेको ५ ट्रक भन्दा बढी खाने तेल धारा नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले..
​इन्धन अभावले दुई महीनादेखि आयोजनाको काम ठप्प
प्यूठान । नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्ति नहुँदा जिल्लाका ठूला बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण कार्य पछिल्लो दुई महिनादेखि ठप्प भएको छ । जिल्लामा सडक, भवन र सिँचाइका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरकारी कार्यालयले..
​हिमालयन डिष्टिलरीले २० प्रतिशत लाभांश दिने
वीरगञ्ज । हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बुधबार पर्साको परवानीपुरस्थित कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा सम्पन्न १५ औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको सो..
भार बढी हुँदा ट्रान्सफर्मर पड्किए, दैनिक दश वटासम्म ट्रान्सफर्मर जल्ने, १० करोड भन्दा बढि क्षति
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका– १६ मा बसोबास गर्दै आएकी रिता लामिछानेले खाना पकाउँदै गर्दा एक्कासी विद्युत् गयो । इन्धनको अभावभएपछि राइस कुकरमा खाना पकाउँदै गर्दा विद्युत् गएसँगै एक्कासी ठूलो आवाज..
प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि बढायो लोडसेडिङ, खाना पकाउने आठ बजे अघि कि पछि हेर्नोस तालिका
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरि लोडसेडिङको समय बढाएर हप्तामा छपन्न घण्टा पुर्याएको छ । नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भएर इन्धन संकट भोगिरहेको बेला प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाउने..
​सुनौलीमा ११३ ग्यास बुलेट नेपाल छिर्न तयार, भारतले आउन नै दिएन
काठमाडौं । वीरगञ्जको दशगजामा मधेसी मोर्चाको नाकाबन्दीपछि रि–रुट र विभिन्न रिफाइनरीबाट ल्याइएका १ सय १३ वटा ग्यास बुलेट सुनौली नाकामा रोकिएका छन्। सुनौली नाकामा मधेसी मोर्चाको कुनै अवरोध नभए पनि..
​नलसिंहगाडलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन माग
जाजरकोट । जिल्लामा निर्माण हुने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाएर निर्माणको काम तीव्र पार्न स्थानीयवासीले सरकारसँग माग गरेका छन्। हालै सरकारले जारी गरेको स्वेतपत्रमा मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि..
​कालोबजारी गर्ने धमाधम पक्राउ, १६ हजार लिटर डिजेल, साढे ७ हजार लिटर पेट्रोल र ३७ सिलिन्डर ग्यास प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । कालोबजारी गर्दै तेल तथा ग्यास बेच्ने व्यवसायीहरुलाई काठमाडौं प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न सुरु गरेको छ। राजधानीमा बिहिबार नेपाल प्रहरीले अवैध रुपमा बेच्न लागेको १५ हजार ९ सय ८०..
​विद्युत् खपत बढ्यो, धमाधम ट्रान्सफर्मर जल्न थाले
भक्तपुर । इन्धन अभावका कारण विद्युत् खपत अत्यधिक बढेपछि लोड धान्न नसक्दा ठाउँठाउँका ट्रान्सफर्मर जल्न थालेका छन् । विशेषगरी साँझको समयमा उपभोक्ताले बढी विद्युत् खपत गर्दा ट्रान्सफर्मर र कालो तार..
०४५ को नाकाबन्दीमा यसरी आएको थियो चीनबाट तेल
काठमाडौं । ०४५ मा भारतले सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गरेपछि निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल झिकाएको थियो । त्यतिवेला रुस, सिंगापुर, इराक, कुवेतलगायत देशका सरकारी कम्पनीबाट तेल खरिद गरेर पानीजहाजमा इन्धन ल्याई..
​४३ ट्यांकर डिजेल आयो, बुधबार कहाँबाट कति आयो इन्धन
काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीका कारण बुधबार पनि नेपाल–भारत सीमा नाकाहरुबाट आयात प्रभावित बन्यो । काँकडभिट्टा–पानीट्यांकी नाकाबाट बुधबार दिनभरमा कुनैपनि पेट्रोलियम पदार्थका गाडी नेपाल प्रवेश गरेनन् । विराटनगर–जोगबनी नाकाबाट बुधबार ८ ट्यांकर डिजेल,..
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले कात्तिक महिनामा मात्रै सात अर्ब राजस्व गुमायो, सात करोड असुली
वीरगन्ज । नेपालकै प्रमुख राजस्व असुली केन्द्र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट आयात निर्यात ठप्प भएपछि राजस्व असुलीमा गम्भीर असर परेको छ । मधेसकेन्द्रित दलको आह्वानमा नेपाल–भारत मुख्य नाकाको सीमामा पर्ने मितेरी पुलमै..
ग्यासका बुलेट सुनौलीमा, उपभोक्ताको लाम वीरगञ्जमा
वीरगञ्ज । भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण इन्धन आयातको मुख्यमार्ग मानिएको वीरगञ्जकै उपभोक्ता नमूना सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । खाना पकाउने ग्यास बाँड्ने हल्ला सुनेर रातभरि लाममा बसेका वीरगञ्जवासी मङ्गलबार..
नेपालले चीनसँग माग्यो अनुदानमा थप इन्धन, चिनले १० हजार इन्डक्सन चुलो पनि दिने
काठमाडौं । नेपालले चीनसँग थप इन्धन अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । भारतको नाकाबन्दी अझै केही समय लम्बिने देखिएपछि नेपाल सरकारले चीनसँग थप इन्धन अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन..
​महाकाली अञ्चलमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने करदाता सम्मानित
भीमदत्तनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भीमदत्तनगर, कञ्चनपुरले ६ जना करदातालाई सोमबार सम्मान गरेको छ । सप्ताहव्यापी चौथो राष्ट्रिय कर दिवसको समापन समारोहका अवसर महाकाली अञ्चलमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने व्यवसायी..
​डिजेल बोकेको ट्याङ्कर प्रहरी नियन्त्रणमा
रासस । नेपाल आयल निगमको भलबारी डिपोबाट तेल बोकेर काठमाडौंका लागि हिडेको ट्याङ्कर नवलपरासीमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रुपन्देहीस्थित भलवारी डिपोबाट चलान भएको ना४ख ७१४५ नम्बरको ट्याङ्करलाई ४ मंसीरमा नवलपरासी..
​४ दिन निजी सवारीलाई तेल बाँडिने, कार र मोटरसाइकलले छुट्टाछुट्टै दिन तेल भर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एकसाता भित्र काठमाडौंका निजी सवारीलाई पनि तेल वितरण गर्ने भएको छ । चीनबाट ल्याएको अनुदानको पेट्रोलका कारण थानकोट डिपोमा मौज्दात बढेपछि तेल वितरणको तयारी गरिएको आयल..
​चितवनमा एक अर्ब कम उठ्यो राजस्व, नाकाबन्दीले अन्तःशुल्कमा पनि असर
चितवन । भारतीको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उद्योग र व्यापारमा कमी आएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा सङ्कलन हुने करमा २५ प्रतिशतले कमी आएको छ । नाकामा अवरोध हुँदा भन्सारबाट कच्चा पदार्थ एवम्..
​नाकाबन्दीको चौतर्फी असर, दैनिक २ अर्बको आर्थिक क्षति
काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकामा लामो समयदेखि भएको पारवहन अवरोधका कारण समाजका हरेक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भई जनता आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको..
आयल निगमले आइतबारबाट निजी सवारीलाई इन्धन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आइतबारबाट निजी सवारीसाधनलाई इन्धन वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । चीनबाट अनुदानमा आएको पेट्रोल मौज्दात रहेको र भारतबाट समेत छिटफुट रूपमा पेट्रोल आएका कारण उपत्यकामा..
​महिलाका लागि निशुल्क उद्योग दर्ता
काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उनीहरुद्धारा सञ्चालित साना उद्योगलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ । बिहीवार एक कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले औद्योगिक..
​नेपाली व्यवसायी थप मारमा, बन्दरगाहका ‘क्लियरिङ एजेन्ट’ले पनि काम ठप्प पारे
काठमाडौं । कोलकातास्थित बन्दरगाहका ‘क्लियरिङ एजेन्ट’ले नेपालतर्फको काम ठप्प पारेका छन् । आयातकर्ताले ट्रक, कन्टेनरको विलम्ब जरिवाना र शुल्क नबुझाएको कारण देखाउँदै उनीहरुले काम ठप्प पारेका हुन् । भारतीय नाकाबन्दी..
​एकै दिनमा ६ हजार हिटरको माग, थिमिका प्रजापतिलाई हिटर बनाउन भ्याइनभ्याइ
भक्तपुर । मध्यपुर थिमि नगरपालिका–११ दिगुटोलका आशाबहादुर प्रजापतिको सिङ्गो परिवारलाई विगत एक महीनादेखि खाना खाने फुर्सदसम्म छैन । मध्यपुरथिमिमै पहिलोपटक २०२५ सालमा माटोबाट बनेको विद्युतीय हिटरको उत्पादन शुरु गरेका उनको छोरादेखि..
​आज बेचिँदैछ ९६ हजार लिटर मट्टितेल, तपाईँको नजिक पर्ने ठाउँ हेर्नुस्
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बिहीबार ९६ हजार लिटर मट्टितेल वितरण गर्दैछ। निगमले विभिन्न पेट्रोलियम डिलरहरुबाट यो परिमाणमा मट्टितेल वितरण गर्न लागेको हो। निगमले उपत्यकाका ३२ वटा पेट्रोल पम्पमार्फत् बिक्री गर्न..
Results 889: You are at page 21 of 30